Wakhtiga Rasmiga Ah Ee Imaraadka Carabtu Bilaabayo Dhismaha Saldhiga Military Ee Berbera Oo La Shaaciyey [SII AKHRI]
Wednesday November 07, 2018 - 08:58:44 in Wararka
Dowladda Imaaraadka Carabta sheegtay in uu badhtamaha sanadka soo socda ee 2019 ka shaqo billaabi doono Saldhigga Milatari ee ay ka dhiseyo Magaalada Berbera.
Wargeyska Bloomberg ayaa oo soo xiganaya saraakiil ka mid ah dowladda Imaaraadka Carabta iyo mas’uuliyiin ka mid ah Maamulka Somaliland ayaa sheegay in saldhigga uu si rasmi ah u shaqo billaabi doono Bisha June ee sanadka soo socda.
Waxa ay saraakiishaas u sheegeen Wargeyska in Saldhigga dhismahiisa mar hore billowday islamarkaana lagu xidhay hadda qalabka wax basaasa sida Kaamirooyinka loo yaqaan CCTV ee dhaq dhaqaaqa lagala socdo.
Waxaa kale oo ay sheegeen in Saldhigga lagu xidhay Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iyana xambaarsan Kaamirooyinka kuwaas oo ilaalin doona masaafo dhan 800km oo ah hareeraha Saldhigga ee Badda,waxaana laga hortagayaa kalluumeysiga sharci darrada ah,Burcad Badeedda iyo waxyaabaha kale ee caqabad ku noqon kara shaqada Saldhigga.
Abdulla Darwish, oo ah Agaasimaha Sharikadda Dhismaha ee Sharjah ,ayaa sheegay in sharikaddiisa ay ku guuleysatay qandaraaska dhismaha saldhigga oo ku kacaya $90Milyan oo doollar islamarkaana ka hor bisha June ay shaqada dhameyn doonaan.
Wakiilkii hore ee Somaliland u joogay Dubai Baashe Cawil ayaa isaguna sheegay in Saldhigga lagala soconayo dhaq dhaqaaqa gacanka Baabal Mandab,Kanaalka Zuweys, Dekadda Casab ee Eritrea oo uu Imaaraadka maamulo sidaasna uu saldhigga ku noqonayo mid uu ka faa’ideysto Gobolka oo dhan.